Ikhabhinethi Cove ngaseMlambo
Thatha inyathelo emva kwexesha xa ungena kwindlwana yethu yeeplanga ngasemlanjeni. Yakhiwa ngo-1949, le khabhinethi ifana nendlu yeelog ezakhiwe ngabantu abafuna igolide baseAlaska. Nangona silamhla kwimiba emininzi siwugcinile umtsalane wendalo womthi ongagqitywanga, rhabaxa, izigodo eziqingqwe ngesandla kunye nemiqadi ehamba ze.
Inkuthazo yale ndlu yafunyanwa ngutatomkhulu wam owachitha ixesha eAlaska esebenza kuhola wendlela iAlcan.
*IRENTESHO Ibandakanya UKUHAMBA MAHHALA KWI-SCENIC CITY EMPRESS RIVER BOAT!*
Enye yezona zinto zibalaseleyo zeCabin yifestile yemifanekiso yayo enkulu ejonge kuMlambo i-Iowa. Ngokwenene yiparadesi yabathandi bendalo njengoko kuhlala kukho uKhozi olunempandla olubhabha phezulu, iikhadinali zifika kwindawo etyisa yonke imihla, amaxhama abhadula kwindawo enethemba lokufumana ishwamshwam kwigadi yeziqhamo. Izihlahla zeLilac ezikufutshane zibonelela ngevumba elimnandi lasezulwini ngelixa uhleli kwiveranda engaphambili okanye uchwechwa ukuze uhlale kwidokhi engaphantsi kwekhabhathi.
Ikhabhinethi kukuhamba nje okufutshane ukuya kwindawo ephambili yedolophu (malunga nemizuzu emi-5) apho iivenkile zelizwe ezithandekayo zikwamkela ngobuhle bazo bokwenyani.
Thatha uhambo kwi-Scenic City Empress ngenye yeendwendwe zethu SIMAHLA ezibandakanyiweyo kubhukisho. Olu khenketho lwembali yomlambo ukuya kuMlambo i-Iowa luthandwa kakhulu kuthi! Ukuba ulapha nge-4 kaJulayi qiniseka ukubhukisha njengoko izaliseka ngokukhawuleza!
Siyazivumela izilwanyana zasekhaya ngee-$50 zentlawulo yesilwanyana sasekhaya. Zonke izilwanyana zasekhaya kufuneka zichazwe. Sivumela izinja ezi-2 okanye inja enkulu enye, ukuba unezinye iimeko nceda ufikelele kuthi phambi kokuba ubhukishe. Enkosi!
Ikhabhinethi ihleli kwindawo ezolileyo ye-de-sac enamakhaya ambalwa kunye nokufikelela ngasese emlanjeni.
Siyafumaneka ukuba ufuna nantoni na konke konke nceda uzive ukhululekile ukusithumelela umyalezo!